यो नाम किन? - 1aviagem.com
खैर, यो नाम मैले यूट्यूबमा एक च्यानल सुरू गरे पछि अपनाईएको थियो। एक अद्वितीय नाम प्राप्त गर्न आवश्यक थियो।
च्यानल (र अब ब्लग पनि) यात्राको बारेमा कुरा गर्नेछ। र म सामान्यतया यात्रा दोहोर्याउँदैन। म नयाँ देशका लागि वा नयाँ गन्तव्यहरूको लागि जबसम्म सम्भव हुन्छ। त्यसैले यदि तपाइँ आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन र फरक स्थानमा यात्रा गर्नुहुन्छ, यो सधैँ तपाईंको "पहिलो यात्रा" हुनेछ।
(मेरो लक्ष्य दुनियाका सबै देशहरूमा यात्रा गर्न सक्षम छ, के म सक्षम हुन सक्छु?)।
त्यसोभएको पहिलो नाम मनमा आयो: primeraviagem.com।
तर त्यसपछि मैले देखे कि यो धेरै लामो हुनेछ!
त्यसैले मैले निर्णय गर्न सकिन: 1th यात्रा। यो छोटो र सुन्दर ठिकै देखिन्छ?! ठीक छ, यो हुन्छ कि यूट्युब (शब्दशैली र सामान्य मा इन्टरनेट) विशेष क्यारेक्टर जस्तै नाम स्वीकार गर्दैन। यसैले लेख्न सकिएन। (आई.ए.
पुराना दिनहरूमा किबोर्डमा कुञ्जी थिएन। र गर्नका लागि यो टाइप गर्न आवश्यक थियो: 1a। 1 ™ लाई घुमाउनुहोस्।
तर जब मैले एक ह्याटग्यागमा यात्रामा 1 प्रयोग गरिरहेको थिएँ, टाइप गर्नुहोस्: # 1a.travel Instagram र Facebook #1a लाई ह्याकिंग समाप्त भयो (यात्रा नाम निगल!)। (आई.ए.
समाधान बिन्दु हटाउन थियो। त्यसैले यो समाप्त हुन समाप्त भयो: "1aviagem"सबै सँगै, संक्षिप्त र बिन्दु बिना !! र त्यो अझै पनि के हो।
त्यसकारण यो नाम बाट परिवर्तन गरिएको थियो:
1aviagem(अह eeehhh) よ っ て よ っ て! (आई.ए.
त्यसो भए, यदि तपाईं जस्तै, मेरो जस्तै, इन्टरनेटका यी समुद्रहरूमा, पहिलो पटक नाविक हो, डुङ्गामा पाउनुहोस्, (रजस्टर गर्नुहोस् आफैलाई दर्ता गर्नुहोस्) र एक साथ हामी यस संसारलाई बेवास्ता गर्नेछौं।
स्वागत छ 1aviagem.com! (आई.ए.
यो # रीगा स्ट्याम्प कति सुन्दर छ र कति सुन्दर उसको # ईतिहास छ। के तपाईंले बुझ्नुहुन्छ कि यो सिल प्रयोग भइरहेको बेला, # ब्रासिल # पत्ता लगाइयो? थप पहुँच जान्न चाहनुहुन्छ 1aviagemसाथ #1aviagem #templarios # १1500०० # १th औं शताब्दी